निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर मुद्दामा आज फैसला
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर समेतको माग गर्दैै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गर्नुभएको रिटमा बुधबार आदेश गर्ने भएको छ ।
मुद्दाका पक्ष र विपक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले मुद्दामा दुवै पक्षसँगको छलफल सकिएको बताउनुभयो । प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, ‘दुवै पक्षसँगको छलफल सकिएको छ । भोलिका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ । ’
सर्वोच्चले निवेदकको मागदाबी अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर र पुनः मतपत्र छपाइको आदेश गरेमा निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने सम्भावना न्यून रहन्छ तर मागदाबी अनुसारको आदेश जारी नगरेको अवस्थामा भने निर्वाचन कार्यतालिका र तयारी अनुसार निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । असोज २२ गते राजपाका नेता शुक्लाले निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर गरी मनोनयनपछि सार्न र मतपत्रमा अहिलेको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै नयाँ मतपत्र छपाइको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका फरक–फरक मतपत्रको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । मागअनुसार आदेश जारी भएमा चार प्रकारका मतपत्र छापिनेछन् ।
शुक्लाले प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा फरक–फरक मतपत्रको माग गर्नुभएको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको फरक फरक मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ तर निर्वाचन आयोगले भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि एउटा र दुवैको समानुपातिकका लागि अर्को मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मेनुकाले ल्याईन् दोस्रो कृति 'समयको आवाज'
मेनुका चापागाईको कवितासंग्रह ‘समयको आवाज’ शनिबार काठमाण्डौमा लोकापर्ण गरिएको छ । रमेश खकुरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा ...
नेपाली युवा वैज्ञाानिकले थाइल्याण्डमा जिते रजत पदक !
नेपालका युवा वैज्ञानिकहरुले इञ्जिनियरिङ विधामा रजत पदक हात पार्न सफल भएका छन । थाइल्याण्डमा आयोजित सातौं एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ...
काठमाडौं महानगरले स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा सुरु गर्‍यो
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंलाई छिट्टै नै ‘स्मार्टसिटी’कारुपमा विकास गर्नका लागि काम गरिरहेको दाबी ...
ब्याजदर वृद्धिले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ
ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएकोप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार मह ...
सरकारी हिरोमाथि नेकपाले गर्‍यो कारबाही
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेकपा निकट क्रान्तिकारी जनपरिषद बाराले जिल्ला वन प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रमाथि कारवाही ग ...
श्रीमतीको हत्या गर्ने दुर्गा नेपाली पक्राउ
श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका मदाने-६ पुर्कोटदह पनाहका दुर्गा बहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन् । कात्तिक १५ गते राति मान्छे नबस्ने ...
स्थापितको बर्खास्तीपछी को हुँदैछ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ?
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा रिक्त रहेकाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तत्काल नियुक्त नगर्ने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार ...
कृषि विकास बैंक लिमिटेडले २ सय ६० कर्मचारी माग
कास बैंक लिमिटेडले एकै पटक २६० कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले आज एक सूचना जारि गर्दै तह ४ देखि तह ७ सम्मका कर्मचारी माग गरेको । ब ...
एनआइसी एसिया बैंकमा कर्मचारी माग
एनआइसी एसिया बैंकले एकमुस्ट २०० जनालाई जागिर दिने भएको छ। बैंकले बुधबार बिज्ञापन प्रकाशित गरी स्नातक उत्तिर्णसँग जागिरका लागि आवे ...
नेपाल बैंक लिमिटेडले एकैपटक १०८ जना कर्मचारी माग
नेपाल बैंक लिमिटेडले एकैपटक १०८ जना कर्मचारी माग गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको यो बैैंकले आगामी १५ दिन भित्रै रितपूर्वक आवेदन दिनुप ...
Kantipath News Published by Ichhya Khadka for Namaste Nepal Media P.Ltd
Copyright ©2018 All Rights Reserved Kantipath.com